Nhau - Matanho ekuti ungashandise sei Dry mhando sandblast kabhineti
Dry sandblasting muchina unogona kubvisa ngura uye kutsetseka pamusoro pebasa chidimbu ne sandblasting.
(1) vhura hatch inoshanda yemuchina we sandblasting, kurodha hasha, wedzera 10kg panguva, uye vhara hatch inoshanda.
(2) dzvanya switch yemagetsi.
(3) batidza yekutanga kumusoro switch yekutsi kwemhepo fan.
(4) batidza switch yemhepo.
(5) chinja jecha rekudyisa huwandu nejecha rekudzvanya regulator pazasi peiyo muhombe sandblasting muchina, uye gadzirisa iyo jecha yekudyara huwandu zvinoenderana nezvinodiwa zveiyo workpiece.
6) vhura hatch inoshanda, isa zvidimbu zvebasa zvimwayiswe patafura ye rotary, uye vhara iyo hatch
(7) chitima chazvino chinja: jecha rinofuridza chidimbu chebasa nemagirovhosi anoshanda, ruoko rweruboshwe uye ruoko rwerudyi nepfuti yepfapfaidzo.
(8) chenesa chidimbu chebasa nepfuti yemhepo.
(9) vhura hatch ubudise chidimbu chebasa.
(10) dzima switch yemagetsi yeiyo fan fan.
(11) dzima switch yemagetsi.
(12) vhura musuwo wepadivi webhokisi rine guruva kubvisa jecha remarara.
Manual derusting: Iyi inzira yakapusa yekushandisa, iyo inoshandisa chinotsvaira, sando, bhurasho resimbi, jira rinokonzeresa (bepa), kukuya vhiri uye zvimwe zvishandiso kugogodza, foshoro, kukuya uye kukwaya ngura. Zvakanakira zvacho zviri nyore uye zviri nyore kushanda, mutengo wakaderera, unoshandiswa zvakanyanya mukubvisa ngura kwemidziyo uye zvivakwa zviri kushandiswa, asi zvinokanganisa iri basa rakanyanya, kushanda kwakadzika, kusagadzikana kwehunhu uye nharaunda isina kushanda yekushanda.
Jecha nenyunje uye ngura kubviswa: inowanzo kuve inoumbwa nesvutuguru pfapfaidzo kukurwa kwevhu kuti uwane nzvimbo yekuchenesa uye yakakodzera hukasha, kusanganisira yakavhurika jecha kurira, yakavharwa jecha nenyunje uye yekutsvaira jecha nenyunje. Kuvhura jecha kunonoka kunoshandiswa zvakanyanya, izvo zvinogona kunyatso kuchenesa tsvina yese pasimbi pamusoro, ine yakanaka uye yakagadzikana ngura kubvisa mhando. Nekudaro, kune ese esimbi fume hood, inguva yekukakavara.
Yakakwira yekumanikidza mvura derusting: kukanganisa kwekumanikidza-kwemvura kuyerera (pamwe nekukuya mhedzisiro yehasha) uye yekuchekesa mvura chiito chinoshandiswa kuparadza kunamatira kwengura uye kupfeka kune ndiro yesimbi, inozivikanwa nekusava neguruva kusvibiswa, hapana kukuvara kune simbi yesimbi uye yakanaka mhedzisiro. Nekudaro, iyo simbi ndiro mushure mekubvisa ngura iri nyore kudzoka kune ngura, saka zvinodikanwa kuti uise yakakosha nyoro derusting kupfeka.